Al Shabaab oo Weeraray ciidamo huwan ah oo duullaan ku qaaday degmada Awdheegle
Dagaallo Culus oo ka dhacay duleedka deegaanka Kulbiyoow ee Jubbada Hoose.
Al Shabaab Oo Weerar Madaafiic ah ku qaaday Saldhigga Melleteri Ee Baar Sanguuni.
Ruushka iyo Turkiga oo Maleeshiyaadka Kurdiyiinta uqabtay in 150 maalmood gudahood ay uga baxaan Waqooyiga Suuriya.
Dowladda Zimbabwe Oo Sheegtay 50 Maroodi ah ay dalkeeda Ugu dhinteen Abaaro.
R/Wasaaraha Itoobiya oo ku hanjabay in Awood Melleteri uu u adeegsan doono difaacidda Biya Xireenka Al Nahda.
Tuesday August 06, 2019 - 21:06:43 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo huwan jinsiyo kala duwan leh oo duullaan ku qaaday degmada Awadhiigle ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa maanta lakulmay weeraro kala duwan ee khasaara dhaliyay.
Wararka ka imaanaya Sh/Hoose ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay weeraro xooggan ku qaadeen ciidamo huwan ah oo shalay kasoo dhaqaaqay garoonka diyaaradaha Balidoogle una jiheystay dhanka degmada Awdheegle oo qiyaastii 70 Km ujirta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay dhowr jeer ciidamadan iswata ku weerareen intii habqankoodu marayay wadada xiriirisa Tooratooroow iyo Awdheegle balse lama oga khasaaraha ka dhashay.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada huwanta ah ay gudaha ugaleen Awdheegle ayna caawa halkaas ku hoyanayaan, ciidamadan oo ubadan kuwa Dowladda Federaalka ee Banagraafta loo yaqaan ee Mareykanku tababaray waxaa gelbinayay gaadiid qafilan oo ay wataan saraakiil tababarayaal American ah waxaana dhanka cirka ka ilaalinayay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan.
Dabayaaqadii bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay ayay sidaan oo kale ciidamo huwan ah waxay duullaan ugu qaadeen deegaanka Bariire halkaas oo ay kula kulmayaan weeraro joogta ah.
Al Shabaab Oo Sheegtay in ay Mas'uul ka aheyd doon ku degtay duleedka Marka.
Ciidamada Al Shabaab oo la wareegay deegaanka ku dhow degmada Dhoobleey.
Al-Shabaab Oo Weeraray Ciidamada DF Ee ku sugan Awdheegle.